खतरनाक खलनायक तेजा ऐर - Manaslu Post
खतरनाक खलनायक तेजा ऐर
मन बहादुर पुन २४ फाल्गुन २०७६, शनिबार २१:३१ 731 पटक हेरिएको
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लागेर सफलता बटुल्ने कलाकार थोरै छन् । त्यसो त कम मात्रामै चलचित्र सफल हुन्छन् भने कलाकार पनि कम मात्रामा नै त सफल हुने भए । यो स्वभाविक हो । तर, सवै एकै क्षेत्रमा सफल हुन्छन् भन्ने पनि छैन ।
एउटै क्षेत्रका पनि फरक फरक कार्य र भूमिका हुन्छन् । ती भूमिका अभिनेता तथा अभिनेत्रीको अभिनयमा नै निर्भर हुन्छ ।
केहीलाई खल पात्रको भूमिका फिट हुन्छ त केही खलपात्रको भूमिकामा देखिए पनि नायकको भन्दा कम्ति अभिनय हुँदैन । केही नायक नायिकाहरुले चलचित्रको मुख्य भूमिकामा निभाएको भए पनि सफलताको स्वाद चाख्न पाएका हुँदैनन् ।
चलचित्रमा लामो समयदेखि अभिनय गर्दै आएको भए पनि अभिनेता तेजा ऐरलाइ चलचित्रमा खलनायककाे रूपमा बढी रुचाइए ।
नेपाली फिल्म उद्योगमा तेजा ऐरलाई भयानक खलपात्रका रुपमा लिइन्छ । उनले अभिनय गरेका अधिकांश चलचित्रहरुमा नकारात्मक भूमिका नै निर्वाह गरेका छन् ।
चलचित्रमा उनको खल चरित्र देखेर मानिसहरु साँच्चिकै भयभीत हुने गर्दथे । मौहर बस्ती चौधरी फिल्मबाट अभिनय क्षेत्रमा प्रबेष गरेका ऐर डगर चौधरी फिल्म सुपरहित भएपछि निरन्तर चलचित्र उद्योगमा कदम राखेका थिए ।
महेन्द्रनगरका ऐरले बिजयपथ, बिरासत, हिम्मतवाली, जय परशुराम, रामजाने, कमाण्डर, लगायत दर्जनौ चलचित्रमा खतरनाक खलनायकका रुपमा अभिनय गरेका छन् ।
उनले खलनायकका रुपमा अभिनय गरेको सत्या र हिरासत छिट्टै पर्दशनको तयारीमा रहेको छ ।
जहाँ काँसका फूलहरूबीच प्रेम
काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन अघि
नारी सौन्दर्य र सोह्र
विश्वका एक सय प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा सपना रोका मगर
संसारकै सुन्दरी नायिकाको बोल्ड तस्विर
कमेडियन भारती सिंह गिरफ्तार, घरमै भेटियो गाँजा
पिकअप भ्यान त्रिशूलीमा खस्यो, ३ जना बेपत्ता
शिकार पर्यटन सुरु, एक झारल र नाउरको शिकार हुने
नेपालमा कहिले आइपुग्छ कोरोना खोप ?
निजगढ विमानस्थल: गुरुयोजना बनाउने कम्पनी छनोट
खाना अपच हुन्छ ? यी ८ घरेलु उपायले समाधान गर्न सक्छ
नेकपा सचिवालय बैठक शनिबार १ बजे बस्ने, अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव पेश हुने
अश्लिल भिडियो देखाएर छोरी बलात्कार गर्ने पक्राउ
गुल्मीमा जीप दुर्घटना, ५ जनाको मृत्यु, ३ घाइते
उत्प्रेरक वक्ता सन्तोष लामाको “सफलताको Blueprint” नामक पुस्तक बिमोचन